Dadka ku waxyeeloobay Dab ka dhacay Isbitaal ku yaalla K/Kuuriya oo sii kordhay. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADadka ku waxyeeloobay Dab ka dhacay Isbitaal ku yaalla K/Kuuriya oo sii kordhay.
Dadka ku waxyeeloobay Dab ka dhacay Isbitaal ku yaalla K/Kuuriya oo sii kordhay.
January 26, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Sida laga soo xigtay Saraakiisha Caafimaadka ee Kuuriyada Koofureed, Maanta oo Jimco ah dab ka kacay Isbitaal ku yaalla Dalkaasi ayaa sababay Geerida 31-qof, in ka badan 50-kalane waa ay ku waxyeeloobeen.
Wakaaladda Yonhap News Agency oo soo xiganeysa Saraakiisha Kooxda Dab damiska ah ayaa daabacday in 31-qof ay dhinteen kadib markii intooda badan ay qabatimoobeen (Naqaska ku dhigay), halka kuwo kalane uu gaaray dabka.
Magaalada Isbitaalka dabku qabsaday uu ku yaalla ayaa ah Miryang waxayna Seoul oo ah Caasimadda Koofurta Korea u jirtaa 270km dhanka Koofur galbeed.
Kooxaha Dab damiska iyo kuwa Gurmadka Deg dega oo iskaashanaya ayaa isbitaalka kasoo saaray Bukaanada Gudaha jiray, inta ay socotay howlaha lagu daminayo dabka ka kacay qeybta Gargaarka Deg deg ah.
Dabka ayaa ku fidey qeybo ka baxsan halka uu markii hore ka kacay, Warbaahinta qaar ayaa daabacday in Dhimasho ay kor usii dhaafeyso 41-qof, Maadaama Wararka Dabka la xariira daqiiqad waliba ay isa soo tarayaan.
Mas’uuliyiinta Seoul ayaa kulan deg deg ah ka leh dabkaan ka ka kacay Isbitaalka, waxaana lagu wadaa in ay kasoo saaraan Tiro koob la xariira dadka waxyeelo ay gaartay iyo waxyaabaha dabka sababay.
Bishii Disembar, 29 qof ayaa ku Geeriyootay dab ka kacay Xarun Caafimaadka oo lagu jirdhiso dadka kasoo bogsada Jabka oo ku taalla Koofurta Kuuriya.
DAAWO SAWIRRO: RW Kheyre oo Davos kula kulmay Dhigiisa Canada iyo Madaxweyaha Rwanda.
DEG DEG:-Qarax Goordhow Ka Dhacay Duleedka Degmada Balcad
44,935 total views, 1,885 views today
44,935 total views, 1,885 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
45,006 total views, 1,884 views today
45,006 total views, 1,884 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
45,019 total views, 1,883 views today
45,019 total views, 1,883 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
45,041 total views, 1,883 views today
45,041 total views, 1,883 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
45,076 total views, 1,885 views today
45,076 total views, 1,885 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]